Andavamamba : norobain’ny jiolahy nitondra basy ny mpandeha taxi-be rehetra | NewsMada
Andavamamba : norobain’ny jiolahy nitondra basy ny mpandeha taxi-be rehetra
Amin’ny 9 ora maraina, tsy tahotra tsy henatra ireo jiolahy niditra tanaty taxi-be iray teny Andavamamba ary namoaka basy nandrahona ny mpandeha rehetra, ny talata teo. Lasibatra ny mpandeha rehetra…
Nihorohoro ny mpandeha rehetra nanoloana izany, ireo jiolahy tsy taitra amin’ny basy eny am-pelatanany. Araka ny fanazavana, manao andiany efatra ireo jiolahy. Nanararaotra tao anaty fitohanan’ny fiara izy ireo, ary niditra tsiroaroa tao anaty taxi-be.
Voaroba avokoa ny mpandeha rehetra, lasibatra ny finday sy ny vola tany amin’izy ireo. “Toy ireny mitaty rakitra ireny ireo jiolahy nanangona ny finday sy ny volan’ny mpandeha”, hoy ny tovovavy iray anisan’ireo mpandeha tao anaty taxi-be.
Rehefa vita izay, niala moramora toy ireny tsy nisy na inona na inona ireny ireo jiolahy. Tsy nisy sahy nanakana, na niantsoantso, nitazam-potsiny hatramin’ny ny resevera noho ny tahotra. Efa lasa ela ny olon-dratsy vao samy nahaloa-peo sy nimenomenona. Fantatra fa efa nisy ny fitarainana teny anivon’ny mpitandro filaminana.
Tranga efa mpiseho matetika ity fandrobana anaty taxi-be ity. Teo aloha, amin’ny alina no tena lasibatra ireo taxi-be, ary ireo miasa eny Ampefiloha sy Andavamamba iny hatrany ny itrangan’izany. Efa maro ny fitarainana tamin’izany, saingy hatreto aloha, tsy mbola nisy tratra ireo jiolahy.
Fampitandremana sy fanentanana anaty tambajotra sosialy no hany herin’ny olona amin’ny tranga toy izao. Mandry an-driran’antsy, ary efa toy ireny any amin’ny tany tsy misy mpitandro filaminana sy lalàna ireny intsony ny eto an-tanàna. Fanafihana andro antoandrobe, anaty taxi-be feno olona, sns. Aiza no iainan’ny rehetra? Mety hilaza ny mpitandro filaminana fa tsy ho arany avokoa izany!